Paulo Freire: Wax Weydiinta & Praxis - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[ May 24, 2022 ] Jaamacadda Nabadda ayaa raadinaysa ku-xigeenka Professor ee Waxbarashada Nabadda Jobs
Paulo Freire: Wax Weydiin & Praxis
June 5, 2019 Quotes 0
Marka laga reebo baaritaanka, marka laga reebo praxis-ka, shaqsiyaadka runti dad ma noqon karaan. Aqoontu waxay ku soo baxdaa oo kaliya hal abuur iyo dib u ikhtiraacid, iyada oo loo marayo nasasho la’aanta, samir la’aanta, sii wadida, bina aadamka wax baaraya ee ku raad jooga adduunka, adduunka, iyo midba midka kale. ”
-Paulo Freire, Waxbarasho Dulmiga (1970, p. 72)
Dominican Republic: Milicsiga raadinta dhaqanka nabadda ee dugsiyada
Buug Cusub! Sahaminta Betty A. Reardon's Aragtida ku saabsan Nabadda Waxbarashada: Dib u Jeegga, Dib u Jeedinta
Waxbarashada Nabadda: Barbaarinta fasalka dhexe
October 2, 2018 Publications 0
Qoraalkan oo uu qoray George Kent, oo markii hore lagu daabacay 1977 joornaalka Nabadda iyo Isbeddelka, wuxuu baaraya dalabka iyo la qabsiga suurtagalka ah ee barbaarinta 'Paulo Freire's Pedagogy' ee Dulmiga iyo dabaqadda dhexe. [sii wad akhriska…]
Alicia Cabezudo iyo Magnus Haavelsrud oo ku saabsan waxbarashada oo ah dhaqan xoriyad
"Qeybta kaqeybgalka ee geedi socodka barashada nabada sidoo kale waa dhaqan xoriyada lafteeda, iyo praxis meesha milicsiga iyo ficilku ka dhacaan." - Alicia Cabezudo iyo Magnus Haavelsrud [sii wad akhriska…]
Ilan Gur-Ze'ev iyo Waxbarshada: Pedagogies ee Isbadalka iyo Nabada
"Ilan Gur-Ze'ev iyo Waxbarashada: Wax ka beddelka Isbadalka iyo Nabadda" waxay si xeel dheer u falanqeeyaan una soo bandhigaan fikradaha waaweyn ee Ilan Gur-Ze'ev, iyagoo ka tarjumaya sii wadida aragtidiisa iyo wax ku oolnimadiisa xagga waxbarashada. [sii wad akhriska…]